ရုသဝတ္ထု ၄ – The Believer’s Bible Commentary – Myanmar
၅။ ဗောဇကကယ်နှုတ်ခြင်း (၄:၁–၁၂)
၄:၁–၆ မိုးလင်းလျှင်ဗောဇသည် မြို့မိမြို့ဖများ မျက်နှာချင်းဆုံရာ မြို့မတံခါးဝသို့သွားသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရုသကို အနီးဆုံးရွေးပိုင်သော ညီအစ်ကိုသည် ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာသည်။ “မိတ်ဆွေ“ ဟု လှမ်းခေါ်သည်။ မြို့မိမြို့ဖဆယ်ဦးရှေ့မှာ ဗောဇက နေမိနှင့်ရုသတို့အကြောင်း ရှင်းပြသ်။ သို့ဖြင့် နောမိရောင်းချမည့် သူ့ယောက်ျားပိုင် ဧလိမလက်၏မြေိကု ဦးစားပေးဝယ်ခိုင်းသည်။ ထိုအချိန်ထိ ထိုကိုယ်တော်ချော၏ နာမည် မသိရသေးပါ။ ထိုသို့ဝယ်ယူ သိမ်းပိုက်လျှင် သေသောသူ၏ အမျိုးသမီး မုဆိုးမဖြစ်သော မောဘသူ ရုသကိုလည်း တွဲဖက်သိမ်းပိုက်ရသည်ဟု ဆိုသောအခါ နောက်ဆုတ်သွားသည်။ အဘယ်သို့ဆိုသော် သူ့အမွေခံပတ်ဝန်းကျင် ဆုံးရှုံးသွားမည်ကို စိုးရိမ်သည်။
ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းသော သူ့ဘဝညစ်နွမ်းမည်ကို နှမြောသည်။ ရုသကို သိမ်းပိုက်လျှင် သူ့ပိုင်ပစ္စည်း အားလုံးကို ရုသနှင့် ပြိုင်တူ ပိုင်ဆိုင်ကြရတော့မည်။ ယုတ်စွအဆုံး သူ့မြေယာများကိုလည်း ရုအမျိုးက အမွေခံယူကြမည်။၅
နာမည်မဖော် ထိန်ချန်ထားသော ညီအစ်ကို အကြောင်းကို Mathew Poole က ဤသို့ဆိုသည်။-
ဗောဇက သ့နာမည်ကို သေချာပေါက်သိ၍ နာမည်ဖြင့်ခေါ်ပါသည်။ သို့သော်ကျမ်းစာစီရင် ရေးသားသူက တမင်ချန်ထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိနုသော် နာမည်သိစရာမလို။ သူ့ဂုဏ်သိက္ခာထိုခိုက်နိုင်သည်။ အပြစ်ဒဏ် ပေးစရာအကြောင်းလည်း ပေါ်လာနိုင်သည်။ သူ့ညီအစ်ကို၏ နာမည်ကို သူ့ကြောင့် မထိပါးစေလို။၆
ထိုညီအစ်ကို၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပိရိခိုင်မာသည်။ မြို့မိမြို့ဖ သက်သေ(၁၀)ဦးထားသည်။ သက်သေဆယ်ပါး (ပညတ်တော်ဆယ်ပါးပုံဆောင်သည်)က အပြစ်သားအား ရွေးနှုတ်နိုင်စွမ်းမရှိကြောင်း သက်သေထူသည်။ “ဇာတိပကတိကြောင့် ပညတ်တရား အားနည်း၍ မတတ်နိုင်သော အမှုကို ဘုရားသခင်ပြုတော်မူခြင်းငှါ၊ အပြစ်နှင့်ပြည့်စုံသော ဇာတိပကတိ၏ သဏ္ဍာန်ကို ​ဆောင်သော မိမိသားတော်ကို စေလွှတ်၍ အပြစ်ဖြေဘို့ရာ ဇာတိပကတိ၌ အပြစ်ကို ဒဏ်ပေးတော်မူ၏” (ရော ၈:၃)။
ထိုပေါက်ဖော်၏ ငြင်းပယ်ခြင်းသည် အဝယ်ပြုရာတွင်လည်းကောင်း၊ ကတိကဝတ် ပြုရာတွင်လည်းကောင်း လွှဲပြောင်းပေးသည့်အချိန်အခါမျိုးတွင် ထိုသို့လွှဲပြောင်းခြင်းသည် အတည်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေအဖြစ်ဖြင့် ဘိနပ်တစ်ဘက်ချွတ်ပေးရသည်။ ငြင်းပယ်ခံရသော မုဆိုးမက သူ့ကိုငြင်းပယ်သူ၏ မျက်နှာအား တံတွေးထွေးရသည် (တရား ၂၅:၉)။ ယခုကိစ္စတွင်မူ ထိုပေါက်ဖော်ကြီးသည် ရုသ၏တံတွေးထွေးခြင်းမခံရ။ သူ့ဘိနပ်တစ်ဘက်အား ဗောဇသို့ပေးအပ်သည်။
၄:၉–၁၂ ဗောဇသည် ဘိနပ်လက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက် ဧလိမလက်၏ လက်ကျန်ပစ္စည်းများအား စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ကျေညာသည်။ မောဘသူ ရုသကိုလည်း သိမ်းပိုက်သည်။ ပရိတ်သတ်များက ဗောဇအား ဂုဏ်ပြုကြသည်။ ယုဒမယားတာမာဘွားမြင်သော ဖာရက်အမျိုးအနွယ်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပါစေဆိုသည်မှာ သမိုင်းကြောင်း သီးန့်ရှိသည်။ လေဝိထုံးစံအရ ဣသရေလလူမျိုးနှင့် အခြားသော လူမျိုးစုံမက် ပေါင်းဖက်သောအခါ ဣသရေလ အနွယ်ဝင်ဖြစ်သွား၍ သားသမီးထွန်းကားခြင်းကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
၆။ ဒါဝိဒ်မှဩဗကသို့တော်ဝင်နန်းနွယ်စဉ် (၄:၁၃–၂၂)
၄:၁၃–၁၆ ဗောဇနှင့်ရုသတို့သည် စုံမက်ပေါင်းဖက်ကြသောအခါ ဩဗက်ဟူသော သားရတနာ ထွန်းကားလာကြသည်။ နောမိက သူ့ဝမ်းလွယ်ရင်သွေးကဲ့သို့ ချစ်ခင်၍ တဖူးဖူးမှုတ်သည်။ သူနာပြုဆရာမသို့နှယ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သည်။
၄:၁၇–၂၂ နောင်သော် ထိုဩဗက်သည် ယေရှဲ၏ဖခင်၊ ဒါဝိဒ်၏အဘိုးဖြစ်လာသည်။ ကျမ်းစာအုပ်ကို ဒါဝိဒ်၏ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အကျဉ်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်ထားသည်။ ဒါဝိဒ်၏ မြေးမြစ်တွင် ယေရှုခရစ်တော် ပေါ်ထွန်းလာသည် (မ ၁)။ ဤကျမ်းမှ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်သည် အပြည့်အစုံမဟုတ်ပါ။ ရှင်ဘုရင်များခေတ်အစတွင် ရှိမောင် (Simon) ရှိသည်။ ရှင်ဘုရင်များခေတ်ရောက်သည့်တိုင်အောင် ဒါဝိဒ်မမွေးသေး။ နှစ်ပေါင်း (၄၀)ခန့်ကြာသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဆွေမျိုးသဉ်ဖော်ပြရာ၌ နာမည်ကျန်လေ့ရှိသည်။
ယခုဆွေစဉ်မျိုးဆက် အကျဉ်းတွင်လည်း ဒါဝိဒ်တွင် ဆုံးသည်။ ဓမ္မရာဇဝင် ပထမစောင်နှင့် ဒုတိယစောင်များတွင် ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ပါ။
၁။ (နိဒါန်း) J.Vermon McGee, Ruth and Esther, Women of Faith, p.15
၂။ (နိဒါန်း) Irving L.Jensen, Judges/Ruth, p.80.
၃။ (၂:၄-၁၂) Leon Morris (with Arthur E.Cundall), Judgges and Ruth, p.276.277.
၄။ (၄:၁-၆) ယေဗြဲဝေါဟာရက ပိုမိုပီပြင်သည်။ လူ့နာမည်အစား သို့ကြောင့်၊ ထို့ကြောင့်ဟူသော စကားလုံးအသုံးများသည် (peloni, almoni, NKJV Marg) ဟု သုံးသည်။
၅။ (၄:၁-၆) Source unknown
၆။ (၄:၁-၆) Matthew Poole, Matthew Pooles’s commentary on the Holy Bible, p.511.
၇။ (၄:၁-၆) Source unknown.